Dowladda Kenya ayaa bedeshay dhammaan qareenadii u doodayey dacwada badda ee kala… – Hagaag.com
Dowladda Kenya ayaa bedeshay dhammaan qareenadii u doodayey dacwada badda ee kala…
Posted on 21 Febraayo 2021 by Admin in World // 0 Comments
Dowlada Kenya ayaa bedeshay dhammaan qareenadii u doodayay dacwada badda ee kala dhexeysa dowlada Soomaaliya, iyadoo magacawday kuwo cusub xilli wax ka yar bil ay ka harsan tahay dhagaysiga dacwada badda.
Prof Sean Murphy oo ka tirsan George Washington School of Law ayaa hogaaminaya kooxda waxaana wehelinaya Tullion Treves, oo ahaa garsoore hore oo ka tirsana Maxkamadda Caalamiga ah ee Sharciga Badaha. Justice Treves sidoo kale wuxuu ka soo muuqday Maxkamada Caalamiga ah ee Cadaalada (ICJ) kiis la mid ah kii Peru iyo Chile.
Prof Phoebe Okowa, oo bare ka ah Sharciga Caalamiga ee Jaamacadda Queen Mary ee London ayaa ah qofka kaliya ee Kenyanka ah.
Sidoo kale waxaa kooxda ka mid ah Prof Makane Mbengue, oo reer Senegal ah, oo dhiga sharciga caalamiga ah ee Jaamacadda Geneva. Isla jaamacadda (Geneva) waxaa ka socda Prof Laurence Boisson De Chazournes oo isna khabiir ku ah sharciga caalamiga. Waxay haysataa laba jinsiyadood – Switzerland iyo Faransiis.
Xubin kale oo kooxda ka tirsan waa Christian Tams, oo bare ka ah Jaamacadda Glasgow. Muwaadinad Jarmal ah , iyada oo ka soo muuqatay isla maxkamada kiisas kala duwan. Kenya ayaa sidoo kale Eran Sthoeger ka keensatay Israel. wuxuuna kaqeyb qaatay kiiska Peru ee kadhacay Chile.
Dowlada Kenya ayaa badashay qareenada kala ah Karim Khan, Payam Akhavan (American), Makena Muchiri (Kenya), Vaughan Lowe QC (British), Alan Boyle (British), Mathias Forteau (French) iyo Amy Sanders (British).